IsiNgisi Springer Spaniel, inja ejabule kakhulu | Izinja Umhlaba
IsiNgisi Springer Spaniel, inja ejabule kakhulu
El IsiNgisi springer spaniel Uyinja ejabule kakhulu okulula kakhulu ukuzijabulisa naye. Njengoba wayengumdlwane, ukhombisa ukuthi kulula ngaye ukuzuza uthando lomndeni wakhe wonke wabantu nabangane bakhe, ngoba uyathanda ukuhambisana nabathandekayo bakhe.
Yize isikhathi eside, futhi nanamuhla, ehamba nabazingeli ukubasiza ngomsebenzi wabo, ungumlingani omuhle kakhulu izingane kanye nabantu abadala.
1 Umsuka nomlando we-English Springer Spaniel
2 Ziyini izici zayo zomzimba?
3 Kukuphi ukuziphatha kwakho kanye / noma nobuntu bakho?
4 Ukunakekelwa kwe-English Springer Spaniel
5 Izintshisekelo zenja ye-English Springer Spaniel
5.1 Kulula ukuqeqesha
5.2 Kunezinhlobo ezimbili ezihlukene
6 Izithombe ze-English Springer Spaniel
Umsuka nomlando we-English Springer Spaniel
I-protagonist yethu, eyaziwa ngesiNgisi njenge-English Springer Spaniel nangeSpanishi njenge-English Springer Spaniel, uyinja odabuka eNgilandi, lapho ngeNkathi Ephakathi kwakukhona kakade izinja zaseSpain ezazisetshenziswa ekuzingeleni izimpaphe. Ngaleso sikhathi, babehamba nomzingeli ukuyokwenza imisebenzi ehlukene njengokuphakamisa nokuqoqa inyamazane, kepha kusukela ngekhulu le-XNUMX kuye phambili, ochwepheshe babefuna ukuthi babe ngochwepheshe emisebenzini ethile.
Ziyini izici zayo zomzimba?
Kuyinja enkulu, enesisindo esilinganiselwa ku-23kg futhi ukuphakama kuyabuna cishe ngo-51cm, abesifazane bancane kunabesilisa. Inomzimba oqinile, ohlangene, onemilenze eqinile futhi eqinile. Amehlo akhe amile okwe-alimondi futhi unezindlebe ezinhle ezinde eziwela ezinhlangothini zobuso bakhe. Ibhantshi liphakathi nendawo ubude, bushelelezi noma wavy, limnyama noma isibindi linamabala amhlophe, limhlophe linamabala amnyama noma isibindi, i-tricolor, i-blue ruana noma isibindi.
Inesikhathi sokuphila se- iminyaka 14.
Kukuphi ukuziphatha kwakho kanye / noma nobuntu bakho?
I-English Sringer Spaniel iyisilwane ujabulile kakhulu, uyasebenza, uyashesha futhi uyajabulisa lokho kuzokwenza wonke amalungu omndeni athandane. Ihlakaniphile futhi kulula ukuyiqeqesha, ngakho-ke ngeke ube nezinkinga ngayo.
Ukunakekelwa kwe-English Springer Spaniel
Kuyisilwane esidla inyama, futhi esiphethe egazini laso umuzwa wokuzingela wezilwane ezincane. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukunikeza inyama, noma kuthengwe esitolo senyama noma ngesimo sokuphakelayo, esimanzi noma esomile.
Gwema imikhiqizo eyenza imikhiqizo yabo ngamabele nangemikhiqizo, ngoba lezi zithako zingazilimaza kakhulu ngokungakwazi ukugaya kahle.
I-English Springer Spaniel inengubo engadingi ukunakekelwa okukhulu, ngaphandle ibhulashi nsuku zonke ngokwesibonelo ngekhadi noma ngeFurminator. Futhi, ngezikhathi ezithile kuzodingeka ukuthi umgeze.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba nezindlebe ezilengayo kufanele uzibheke ngoba zivame ukuqoqa i-wax. Uma lokhu kwenzeka, kufanele ususe ngamaconsi athile anconywe ngudokotela wezilwane.
Uma sikhuluma ngezipikili, kungakuhle ukuthi uzisike ngezikhathi ezithile ngama-nail clippers aqondene nezinja. Uma ungazi ukuthi ungazisika kanjani, cela udokotela wezilwane ukuthi akufundise.
Njengoba kuyinja osekunesikhathi eside ibhekwa njengenja esebenzayo, namuhla Kusanconywa kakhulu ukuthi umhambise ngaphandle kokuhambahamba, kodwa ngaphezu kwakho konke ukumnikeza amandla engqondo ngemidlalo exhumanayo noma ngokuqeqeshwa. Ungumbusi ohlakaniphe kakhulu ozokujabulela ukuhlala ematasa, ejabulisa umndeni wakhe.
Impilo yalesi silwane yinhle impela, ngoba ngaphandle kwezifo ezijwayelekile noma iyiphi inja engaba nazo (imikhuhlane, umkhuhlane, ukugula okuvamile), ngokunakekelwa okufanele akudingeki ukuthi ihlupheke ngokubi kakhulu. Kepha qaphela, lokhu akusho ukuthi singakwehlisa ukuqapha kwethu, ngoba i-hip dysplasia kubantu abadala ikhona, ngakho-ke awukwazi ukukhohlwa ukuyisa kudokotela wezilwane ngezikhathi ezithile ukuyihlola.
Izintshisekelo zenja ye-English Springer Spaniel
I-English Springer Spaniel wuhlobo oluthandwa kakhulu. Akuyona kuphela inja enhle, kepha futhi ihlakaniphile, ilungele imindeni yezemidlalo. Ngakho-ke, sizokutshela ezinye zezifiso zabo:
Ukuba ohlakaniphile futhi ozizwa esondelene kakhulu nomndeni wakhe, kulula ukumfundisaKokubili amaqhinga ayisisekelo anjengokuthi "hlala", "woza", noma "hlala", kanye nokunye okuyinkimbinkimbi njengokukhahlela, ukujika, noma ukudedela.
Kunezinhlobo ezimbili ezihlukene
Ngokuya ngokuthi zisetshenziselwe ini, ngawo-1940 imigqa emibili eyehlukene yehlukaniswa:
Ibhentshi le-Springer spaniel: okuyizinja ezilethwa emibonisweni. Zinombala omnyama olinganayo, onemilenze emhlophe nokhololo omhlophe entanyeni.
Inkambu ye-Springer spaniel: obani abakhuliswa ukuthi bahlale emindenini ezweni. Umbala wezinwele zakhe umhlophe, nezindlebe zakhe ziphakeme kunalezo zebhentshi. Ngaphezu kwalokho, impumulo yayo inesimo esicijile, esinomlomo omncane.
Izithombe ze-English Springer Spaniel
Ungathanda ukubona ezinye izithombe zalolu hlobo? Noma ngabe ucabanga ukukhulisa umndeni wakho ngeyodwa noma cha, ngokuqinisekile uzothanda ukubona lezi zithombe:
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » IsiNgisi Springer Spaniel, inja ejabule kakhulu
Uyinikeza nini i-puppy kibble?
Yini okufanele siyenze uma amathumbu enja yethu ekhala kakhulu?